Ahoana ny fomba hahazoana a Marijuana Fahazoan-dàlana amin'ny orinasa ao amin'ny Maine
Ny fomba hahazoana fahazoan-dàlana marijuana any Maine dia fanontaniana lehibe ho an'ireo mpandraharaha rongony ao amin'ny fanjakana pine pine.
Maine dia nifidy ny hanome ara-dalàna ny marijuana ampiasan'ny olon-dehibe hatramin'ny fiandohan'ny taona 2016. Na izany aza, nisy ny fihemorana lehibe teny an-dàlana, noho ny governoran'ny fanjakana teo aloha. Tamin'ny taona 2018, volavolan-dalàna roa an'ny volavolan-dalàna no efa noveto. Ireo drafitra ireo dia tena namepetra raha oharina amin'ny lalàna Marijuana Legalization Act izay nolaniana tamin'ny 2016.
Nanapa-kevitra ny solombavambahoaka hanongana ny veto faharoa, ary namoaka ny lalàna LD 1719, izay lasa lalàna tamin'ny 2,2018 Mey. Fa hatramin'ny tapaky ny taona 2019 vao nisy lalàna vaovao naroso hifehezana marijuana ampiasan'ny olon-dehibe.
Nanan-kery ny lalàna vaovao tamin'ny septambra 2019. Na eo aza izany dia tsy natomboka ny 9 Oktobra 2020 ny varotra antsinjarany amin'ny fivarotana ambongadiny, indrindra noho ny COVID-19.
Inona avy ireo karazana fahazoan-dàlana marijuana ao Maine?
Araka ny lalàna Marijuana Legalization Act, misy karazana fahazoan-dàlana rongony 5 isan-karazany ampiasaina any Maine:
Fahazoan-dàlana momba ny fambolena marijuana (misy ambaratonga 4 sy fahazoan-dàlana amin'ny fambolena akanin-jaza)
Lisansa fivarotana marijuana
Lisansa mpamory ohatra
Araka ny lalàn'i Maine, ny saram-pisoratana anarana ho an'ireo fahazoan-dàlana voalaza etsy ambony dia ireto manaraka ireto:
- Kilasy 1: 100 $
- Kilasy 2: 500 $
- Kilasy 3: 500 $
- Kilasy 4: 500 $
- Toeram-pambolena akaninjaza: 60 $
- Tier 1: $ 9 / zavamaniry matotra (ivelan'ny trano) - $ 17 / zavamaniry matotra (anaty trano)
- Tier 2: $ 1,500 (ivelan'ny trano) - $ 3,000 (anaty trano)
- Tier 3: $ 5,000 (ivelan'ny trano) - $ 10,000 (anaty trano)
- Tier 4: $ 15,000 + $ 5,000 isaky ny fampitomboana ny haben'ny canopy (ivelan'ny trano) - $ 30,000 + 10,000 isaky ny fampitomboana ny haben'ny canopy (anatiny)
- Toeram-pambolena akaninjaza: $ 350 (ivelan'ny trano) - $ 350 (anaty trano)
Ahoana ny fomba hahazoana fahazoan-dàlana marijuana any Maine?
Raha te hijery ny fepetra manokana napetraka hatreto ianao momba ny lalàna momba ny ara-dalàna Marijuana an'i Maine, mety te-hijery ny “Lisansa Maine Marijuana: Ahoana ny fomba fangatahana”Lahatsoratra. Misy ihany koa ny fepetra manokana takian'ny mpangataka arakaraka ny karazana fahazoan-dàlana tadiavina.
Amin'ny ankapobeny, ny fizotran'ny fahazoan-dàlana Maine dia manaraka dingana telo:
Dingana voalohany: Fahazoan-dàlana fepetra
Ity dingana ity dia mitaky ny fangatahan'ireo mpangataka fanamarinana ny firaketana ny tantaran'ny heloka bevava. Raha toa ny orinasa mpangataka dia orinasam-pandraharahana rehetra, ny talen'ny talen'ny, ny mpitantana ary ny mpiara-miasa amin'ny ankapobeny dia mitaky fanaraha-maso ny firaketana ny tantaran'ny heloka bevava.
Ankoatr'izay, ny mpiasa sy ny mpangataka fahazoan-dàlana tsirairay avy dia takiana mba hahazoana karatra famantarana (IIC) navoakan'ny OMP. Azonao atao ny mahita ireo takelaka fisoratana anarana Eto. Raha orinasa ny mpangataka, ny tompon'andraikitra, ny talen'ny, ny mpitantana ary ny mpiara-miasa amin'ny ankapobeny dia mila mahazo IIC.
Aorian'izany, ny mpangataka dia mila mameno sy mandefa ny fangatahana fahazoan-dàlana mifehy sy mandoa ny sarany mifanaraka amin'izany.
Ao anatin'ny 90 andro, ny OMP dia handà ny fahazoan-dàlana na hamoaka fahazoan-dàlana tsy azo havaozina izay manan-kery mandritra ny herintaona.
Dingana faharoa: fanomezan-dàlana eo an-toerana
Mila mangataka alalana avy eo an-toerana ny mpangataka. Manana 90 andro ny tanàna-ary 90 andro fanampiny amin'ny tranga sasany- hamaly ny fangatahana alalana eo an-toerana.
Raha misy vondrom-piarahamonina manapa-kevitra fa ny manana fahazoan-dàlana ho manana fahazoan-dàlana dia nahafa-po ny fitsipika sy ny takiana rehetra eo an-toerana, dia mety hisafidy ny hanaiky ny fangatahana alalana eo an-toerana izy ireo.
Ao anatin'ny 10 andro aorian'ny nahazoana alàlana eo an-toerana ankatoavina dia mangataka fampahalalana fanampiny sy antontan-taratasy nohavaozina avy amin'ny mpangataka ny OMP.
Dingana fahatelo: fahazoan-dàlana mavitrika
Ny mpangataka dia mila mandefa fampahalalana fanampiny, izay misy:
Porofon'ny fanarahana ny fepetra takian'ny herinaratra sy fahazoan-dàlana
Fampahalalana sy antontan-taratasy mety momba ny hetra
Misy fiovana amin'ny fampiharana tany am-boalohany
Drafitra nohavaozina voarakitra an-tsoratra
Raha vantany vao voafaritra fa feno ny fepetra takiana dia hanome faktiora an'ny mpangataka OMP ny saram-pitsarana.
Vantany vao voaray ny fandoavam-bola dia hamoaka fahazoan-dàlana azo havaozina- OMP izay hanankery herintaona ny OMP.
Mba hahazoana fahazoan-dàlana ho an'ny orinasa rongony any Maine dia tokony hanomana a koa ianao drafitra fandraharahana rongony. Ity drafitra fandraharahana ity dia tokony hampiditra ireto zavatra manaraka ireto:
Maine mari-pahaizana momba ny marijuana cap
Ny tanàna tsirairay ao amin'ny fanjakana dia misy ny fahafaha-mametra ny isan'ny fahazoan-dàlana navoaka amin'ny fotoana voatondro. Amin'izany lafiny izany dia zava-dehibe ny hifandraisanao amin'ny manam-pahaizana manokana momba an'io raharaha io mba hanamarinana raha toa ka manana karazana kapoaka fahazoan-dàlana ny faritra tianao handraisana anjara.
Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny zavatra azonao atao ianao mba hananana fanajana ny indostrian'ny rongony ao Maine dia aza misalasala Mifandraisa aminay.